Izinto ezili-9 abantu abazenzayo ngokwesini
Kubonakala ngathi sisazi kakuhle izinto abantu abazenzayo ngokwesini. Ewe, apho, iisitokisi zentlanzi, izicathulo ezinezithende, iingubo zangaphantsi ezintle ... Kodwa akukho konke! Kukho inkolelo ehlekisayo, ngokubhekiselele kwindlela amadoda egumbini lokulala aziphatha ngayo njengezityalo ze-botan okanye njenge-hooligans. Abokuqala bayanqikaza ukuvakalisa iminqweno yabo-bathi, ukukhuliswa akuvumeli (i-botany ifunyanwa ngokuqhelekileyo phakathi kweengqondo). Zincinciza kwaye azikhumbuli xa umfazi ethatha inyathelo. Okokugqibela, ngokuchaseneyo, bayasebenza, ngamanye amaxesha banokubakho, bavakalise ngokukhetha ngokuthe ngqo.
Ukuba iqabane livela "kwii-cowgans", sele uyayazi into enokuyenza: ngokuqinisekileyo wanikeza imiyalelo ecacileyo. Kodwa ukuba ukususela kwi "botanists", kuya kufuneka uphule ikhanda lakho okanye udibanise nolwazi lweengcamango zengcamango, ngokubhekiselele ukuba ungayifumana ngandlela-thile indlela abantu bethu bathanda ngayo. Njalo?
Ukwabelana ngesondo emsebenzini
Nabani na amaphupha ukuba intanda yakhe imele ibe ne-orgasm rhoqo, kuba oku kukuqinisekisile kakhulu kokusombulula kwakhe! Abaphandi kwiKholeji yaseRoyal eLondon bacela abangaphezu kwama-2 000 abasetyhini abaneminyaka eli-18 ukuya kuma-83 (!) Iminyaka ukuvavanya amandla abo okuphumeza ukukhutshwa kwizinga eli-7. Kwavela ukuba abafazi abaqondayo abanengqondo yokuhlalutya banamathuba amaninzi okufumana i-orgasms kunabo bahlala neemvakalelo. Ngoko ke, ukuba amadoda afuna ukuonwabela i-orgasm yabesifazana, makangabandezeleka ngokomoya.
Iimbono zabantu: Ukuthanda nomlingane obuthongweni obushushu kukukhethekileyo.
Ngaba uqaphele ukuba owakhethiweyo uyavuswa ngokulungiswa kakuhle? Mhlawumbi lo ngumnqweno wokuya kwindlu yangasese: iifowuni ezipheleleyo ze-bladder kwi-erectile neerves. Kodwa ngokuqhelekileyo kuthethwa ngokuvusa isondo. I-Chronobiologists ithi ngo-7am umsebenzi weehomoni zamadoda ungaphezu kwesiqhelo ngo-20%, kwaye ngo-9: 00 ukuya kwi-50%. Ngoko akufanele ukhanyele umntu okhethiweyo kwindawo ekufutshane kuyo, nangona ungakhange ulungele ngokupheleleyo.
Ukulungelelanisa ubuhlobo obusondeleyo
Umbono womntu: wonke umntu uya kumona, umfazi wam ufuna ukuba ndihlale ndihlala kuyo yonke indawo.
Amadoda athande abesetyhini abasebenzayo kuphela kwimpilo yemihla ngemihla nangomsebenzi, kodwa nakwindawo yokulala. Ngoko ke, khumbula ilizwi elidala lokuba inkosikazi kufuneka ibe yinkosikazi kwindibano, inkosikazi ekhitshini kunye nehenyukazi ebhedini. Yaye kungekhona nje embhedeni. Abaphengululi baseMerika baphicoloza amadoda angama-1,500 kwaye bachonga indawo ezithandekayo zesondo: ibhati yokuhlamba okanye iwawa (ama-82% abaphenduliweyo), imoto (80%), idama (54%), itafile yekhitshi (48%), igumbi elifanelekileyo kunye nepaki yedolophu (42%) .
Iikhamera zekhamera ezingenanto
Umbono wendoda: ukukhululwa ngokwesini kwabesetyhini, ukumlungela kwakhe ukulinga kuyamnandi kakhulu! Abasetyhini banelungelo lokunyaniseka, baninzi abanokuzixazulula: "Ndiya kugqiba isigqibo sokuba ndichithwe." Abaninzi, nangona kunjalo, bayesaba ukunyaniseka kwesinye isizathu: "Uya kuyibona i-cellulite yam neentloko zam esiswini." Ngoko, khumbula: ngelixesha lomnqweno umntu ufuna intombi ethandekayo yonke - ngokupheleleyo kunye ngokupheleleyo, kunye neentlobo kunye ne-cellulite. Ngaphezu koko, akababoni (ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, akaxelelwa ngabo ngokuqhubekayo). Ukongezelela, ngubani othe onke amadoda afana nomzimba omncinci? I-fashion standard of beauty 90x60x90 izazi zeengqondo ziqwalasela i-motivation esinqunyiwe: izibhengezo zokubhengezwa ukuba zihle, kodwa imvelo isasaza abantu ukuba ivumelane nomfazi ofanelekileyo wokubeletha: ngeentambo ezibanzi, isifuba esigcwele kunye nesinqe esincinci. Eyinkimbinkimbi kakhulu ngenxa yesibalo esingenanto asifanelekanga.
Iimbono zabantu: ukuba umfazi uyazinakekela yena, ngoko uya kuhlala ephezulu, nangonyaka, nangeminyaka eyi-10.
Ayithethi umlomo we-silicone kunye nebotox ebunzini, kodwa izinto ezintle kakhulu: iingubo zangaphantsi ezintle ezintle, imilenze ephosiweyo kakuhle, izinwele eziphilileyo kunye nococekileyo, ukulungelelanisa nokucoceka kakuhle (kunye ne-pedicure, ngendlela). Ukususela kwindawo yokujonga abantu, nokuba ngumfazi onobungozi, ukuba uyazibukela, ukhangeleka. Ukuba ibhinqa ayilungiswanga kakuhle, kodwa yinto enhle, le nto ivakalisa ngokuphindaphindiweyo: ngokwenene iyanqabela abantu abanesizathu. Oososayensi baseCanada baqhuba isifundo sokumangalisa: babonisa iqela lamadoda emifanekiso yabasetyhini abalungileyo, baza banikela ngama-dollar ayi-15 ngoku okanye kwi-75 kwiintsuku ezimbini. Ininzi yezifundo zikhethile ukhetho lokuqala, olubonisa ukuba abantu abakwazi ukuqiqa ngesizathu xa ama-hormone aphazamisa kulo mbandela.
Iingcamango zabantu: i-coquetry yamabhinqa yindlela efanelekileyo yokugcina ulwalamano olusisiseko kwi-boredom.
Ukuba kwinqanaba lamantombazana enxulumano kunye nobutyebi kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwesi sixhobo, emva kokufumana isitampu kwiipasipoti zabo, bayalibala ngokupheleleyo ngokudlala ngothando. Yithi, kutheni kungabi nantoni, ndiyondla bhesecht bhetele. Ngoko, indlela eya entliziyweni nakwezinye iindawo zomzimba ilungele ukuba indoda ingabhekanga kwisisu, kodwa ngokutya. Iingqungquthela zibonisa ukuba amadoda athile abatshatileyo angaphantsi. Xa umfazi uzama ukuwacoca ngemifanekiso, edlalwayo, ekhangeleka, ekholiswa kwaye ngokukhawuleza ekhokelela kwisimo soxilongo.
Iingcamango zabantu: naliphi na, nangona isondo esona sihle kakhulu ngokukhawuleza silahlekelwa yimvelaphi yaso. Ewe, ukuba ibhinqa ilungele umdlalo wesondo.
Amadoda acinga ngabafazi ababelana ngesondo. Kwaye ngamaphupha kuya kude. Ngomngcamango, balungele ukutshintsha amaqabane kunye nokuthatha inxaxheba kwimibono, kunye nesondo kwindlu yangasese kwindawo yokudlela, indiza-ngokubanzi enye yezifundo ezizithandayo. Nangona kunjalo, akusiyo yonke imingcipheko yamadoda ekulungele ukuqonda. Ewe, akuyimfuneko: i-sexologist ikholelwa ukuba ukuba zonke iingcamango ezinengqondo zizaliseka, iimvakalelo zazingenakugqithisa kunokuba zilindeleke. Kodwa kutheni ungafezekisi nabangenacala? Ngokomzekelo, indoda yonke yesine ifuna ukuzama iidayini zesini, ingaba ziyi-dildos okanye i-attachments. Nemizuzu emibini yokudlala indima. Kuhle ukuba ubize iqabane kwingxoxo engenangqiqo uze ufumane oko akuphuphayo. Ukuthula okanye ukuhleka? Phakamisa umdlalo "Yenze into oyifunayo". Okanye makhe athathe umdla wakhe omthandayo - ezininzi zilula kunokuba zivakalise.
Iimbono zabantu: i-nude ihambela ngokungagqibekanga, kodwa zingaphi iimfihlo ezifihliweyo kakuhle!
Ngokuqinisekileyo, umzimba wesetyhini uhlasele abantu. Kodwa siyazi ngokuqinisekileyo: isiphumo sendlela yokuzibamba ngokugqithiseleyo sinamandla ngakumbi, kuba ishiya indawo yokucinga, nangona kungabikho umntu oya kucela ukuba iqabane lakhe lingasusi i-blouse yakhe, ibhatyi okanye iibhothi (umzekelo, i-botanist ayiyi kusombululwa kakuhle). Ngako oko, akusoloko kuyimfuneko ukugxotha zonke iimpahla ngokukhawuleza nangomdla, kungcono ukuba uhamba ngezantsi kwaye kwiindawo. Udibanise ngaphandle kwegumbi lokulala. Iingubo ze-Mini kunye ne-turtlenecks ezixinyiweyo aziyi kuhola "njengezinto eziqhelekileyo" ezifakwe kwi-sweatshirt, i-V-neck blouse apho isifuba okanye i-skirt ende elinezihlunu.
Iimbono zabantu: Ngezinye iinkcukacha i-caresses yomlomo ivelisa ngakumbi ukuzonwabisa ngaphezu kwesondo ngokwaso.
Bonke abantu bathanda xa ibhinqa lenza ... Hayi, uyaqonda. Yonke into yokuba uvakalelo lomlomo kunye nolwabelana ngesondo luhluke ngokupheleleyo. Xa uqhagamshelana nolwabhinqa, indoda isoloko yenza umsebenzi oyintloko. Xa isebenze ixesha elide, ukhathele ngakumbi, okubangele ukuba i-orgasm ibe yinto encinci. Xa iqabane "lidibanisa" iqabane, unako ukuphumla kunye nokugxila kwiimvakalelo zakhe, ezomeleza ezi zivakalelo. Ukongezelela, ufumana ulonwabo olukhethekileyo kwinto aziva ngayo ngexesha elinjalo njengenkosi yimeko. Ngoko ukhawuleze ukuqhayisa! Yaye uya kukuthanda ngakumbi. Iqhinga elincinci: abantu baxakeka kakhulu xa iqabane livuyisayo xa lenza i-blowjob, ngaloo ndlela ibonisa ukuba "ukuthandeka" kwakhe akuyena i-katorga, kodwa uyonwabile.
Yintoni abantu abayilindele kwisondo kwi ...
Nangona i-sexologists ixela ukuba inqweno yesintu ibe yiminyaka eyi-18-20, abaneminyaka engama-30 ubudala kwigumbi lokulala nabo banoku-o-th-go kwaye banokuqala ukuqala intloko ukuya kwintsana nangaphambili.
Ubundlobongela bufunwa ngokukhawuleza, amandla aya emsebenzini. Abanye, nangona kunjalo, bazama ukunyamezela le phulo ukuya ngasekhohlo.
Ubundlobongela kubalulekile, kodwa ndifuna ukuphuma kumlingane kungekhona nje ngothando, kodwa nokunyamekela, inkxaso, ingqalelo.
Umngcipheko wobudala: amandla angamadoda ayancipha, kunye nabamnene ngandlela-thile uzame ukuyibuyisela.
Yintoni i-orgasm yesintu?
I-tantric ngokwesini, iingcamango ezisisiseko
Indlela yokufunda ukuzonwabisa ngesondo
Izakhono ezibalulekileyo zenkosikazi enhle
Imithetho esemqoka yesondo emva kokubeleka
Iingxaki zesini zomtshato
Kutheni ndifuna umntu owayengumthandi?
Amanqabhanana ase Banana
Ukulungiselela ukutya kwasekuseni kwi-zodiac
Ngoko ndizenza ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwaye ngenyameko
Ukungakhuselekanga kunye nokuqiniswa kwayo ngoncedo lwe-aromatherapy
I-propolis yamanzi ay-pi-vi
Iphupha elinamandla lebhokhwe
I-Easy Fiesta: i-pizza yemifuno eyenziwe ngokwabo kunye neetamatati kunye noshizi
I-pie neklabishi kwi-multi-trap
Indlela yokubukeka ilungile imihla ngemihla ngaphandle kokwenza i-makeup?
Umququ weepeysi ezomileyo ezomileyo kunye ne-celery
Iibisiki kunye nama-alimondi
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-chamomile
Izixhobo zeMbrati zeenwele